Xildhibaan Cabdi Saabir “Waxaan dalbanayaa in si dhab ah loo baaro Kiiska G/dhexe Cabdi Cali Seed” – Kalfadhi
Cabdi Saabir oo ah Xildhibaan oo ka tirsan Golaha Shacabka ee BF Soomaaliya ayaa ka hadlay Sarkaal ka tirsan ciidanka Booliska Soomaaliya kaasoo la sheegay in uu is daldalay balse qoykiisa ay beeniyeen in uu isaga is dalay kadib markii ay warbaahinta ka soo muuqatay Xaaskiisa Deeqa Axmed.
Cabdi Saabir ayaa ugu baaqay hey’addaha ammaanka in ay baaritaan dhab ah ku sameeyaan kiiskaas isla markaana loo baahan yahay in la soo bandhigo faah faahin rasmi ah oo ku saabsan sababta ka dambeysa geerida Korneel Cabdi Cali Seed.
Waxyaabo badan oo ka muuqda Meydka Marxuumka ayuu sheegay in ay shaki gelin karaan in uu is daldalay Marxuum Seed laakiin taliska Booliiska Soomaaliya looga fadhiyo cadeymo muujinaya in uu is daldalay Gaashaanle Dhexe Cabdi Cali Seed.
“Marxuum G/Dhexe Cabdi Cali Seed waxa uu ahaa Sarkaal ka tirsan Ciidanka Boliiska waxa uuna geeriyooday sida ka muuqata isaga oo ku guda jira waajibkiisii Qaranka isla markaasna xiran lebiskii ciidanka” ayuu yiri Xildhibaan Cabdi Cali Seed.
Xildhibaan Cabdi Saabir ayaa ka dalbaday mas’uuliyiinta hey’adaha ammaanka in ay soo dadajiyaan baaritaankooda si loo helo xog dhameestiran.
“waxaan ugu baaqayaa mas’uuliyiinta taliska ciidanka Booliska iyo hey’adaha kale ee u xilsaaran in ay baaritaan dhab ah ku sameeyaan sida iyo sababta keentay geerida xanuunka leh ee Korneel Seed” ayuu yiri Xildhibaan Cabdi Cali Seed.
Alle ha u naxariistee Marxuum Gaashaanle Dhexe Cabdi Cali Seed ayaa shalay la arkay isagoo xarig qoorta ugu jiro islamarkaana ka laad-laaday geed ku yaalla meel gurigiisa u dhow sida ay sheegayn Saraakiisha Booliiska Soomaaliya.
Geerida Marxuumka ayaa waxaa ka soo baxay warar is khilaafsan sababta ka dambeysa geeridiisa waxaana soo kordhaya qeyla dhaanta qoyska Marxuumka. Meydka Sarkaalkan ayaa waxaa la wareegay Ciidamada Booliska, iyagoo aasi doona, waxaana socda baaritaan ku aadan sababta ka dambeysa geeridiisa.
Xildhibaan Sakariye "Kenya waa in markeeda lagu sameeyaa dhibaatada ay nagu heyso si loo dareensiiyo"